Shirkadda Caymiska Takaful oo xarun ka furatay magalada Garowe (Sawirro) – Puntland Chamber of Commerce
Shirkadda Caymiska Takaful oo xarun ka furatay magalada Garowe (Sawirro)
by mohamed Salad( Ramaas Software) —	27th April 2015
Garowe(pp) Shirkadda Caymiska ee Takaful ee Africa ayaa maanta oo Isniin ah xaruntii ugu horaysay ka furatay magalo madaxda Puntland ee Garowe.
Munaasibadda lagu daah-furayay xaruntan cusub ee Takaful oo lagu qabtay hoolka shirarka Jaamacadda PSU Garowe, ayaa waxaa ka qayb galay wasiiradda Ganacsiga, Warfaafinta, Deegaanka, Gudoomiyaha rugta ganacsiga, siyaasiyiin, ganacsato iyo dadwayne kale, waxana lagu soo bandhigay Takaful addeegyada ay dadka u qabato iyo siday kala yihiin.
Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf oo ka mid ahaa dadkii goobjooga ka ahaa furitaanka xaruntan ayaa sheegay inay ku raacsan yihiin xaruntan iyo addeegyadeeda maadama aysan ka hor imaan karin waxay jidaysay shareecadda Islaamka.
Cumar Xaaji Xuseen waa Agaasimaha Takaful Soomaaliya, khudbad daqiiqado socotay oo uu soo jeediyay, waxa uu kaga waramay shirkadda iyo waxay qabato iyo nooca ay tahay, waxa uu xusay ahmiyadda koowaad ee loo aasasay inay tahay sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka umadda soo food saara, sida ganacsiga, caafimaadka, waxbarashadda iyo arrimaha kale.
Mamule Xuseen waxa uu carabka ku dhuftay Takaful inay ka reeban tahay waxyaabaha aysan raaliga ka ahayn shareecadda Islaamka, ayna ku shaqeeyeen nidaam Islaamic ah oo lagu wada qancsan yahay, wuxuna sheegay inay ku rajo weyn yihiin inay sii gaaraan Dalalka kale ee Africa.
Arrimaha ay kusoo kordhinayaan Puntland ayuu Cumar Xaaji ku sheegay inay tahay shaqo abuur loo samaynayo dhalinyarada oo ragg iyo dumar isagu jira,kor u qaadista kaabayaasha dhaqaalaha Puntland,iyo in maalgashiga dhankiisa la xoojiyo, iyadoona sida uu sheegay Cumar Shirkaddani ay tahay nooceeda markii ugu horaysay oo dalka laga hirgaliyo.
Wacyi-galinta caafimaadka oo la joogtaynayo iyo arrimaha waxbarashadda ayaa ka mid ah waxyaabaha laga faa’iidayo Takaful, oo hadda xarumo ku leh Garowe, Hargaysa,Muqdisho iyo Kismaayo.
Mamulaha guud ee Shirkadda Takaful Mudane Xasan Bashiir Ibraahim ayaa dhankiisa ka waramay sababta loo aasasay, wuxuna sheegay markii ugu horaysay in laga hirgaliyay dalka Kenya, waxayna ku qaadatay sida uu sheegay mudo toban sano ah, balse markii laga hirgalinayay gudaha Soomaaliya ay wax yar ku qaadatay, wuxuna balan qaaday inay si wanagsan umadda Soomaliyeed iyo kuwa kale ee aan Soomaaliga ahayn ugu addeegi doonaan.
Wasiiradda Warfaafinta, Cabdiwali Xirsi Indho-guran, Deegaanka, Guuleed Saalax Barre iyo Ganacsiga Maxamuud Xasan Soocade oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay hirgalinta xafiiska Shirkada Takaful ee Garowe, waxayna ku tilmaameen inay muhiim tahay in la helo xarun Caymis oo dadku iska diiwaan galiyaan, taasoo hadhow qofkii wax gaaraan ama Hantidiisa wax ku dhacaan u gargaari doonto.
Qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay munaasibadda ayaa dhankooda soo dhaweeyay shirkadda Caymiska Takaful, mamulka guud ayaa sheegay inay dhowaan xafiisyo kale ka furan doonaan Bosaso iyo Gaalkacyo, balse si dad badan magaalooyinkaasi uga shaqeeyaan.